Vaovao - Liner amin'ny karatra amin'ny toetrandro rehetra ho an'ny Tesla Model Y Custom Fit Rear Trunk MAT
Liner ho an'ny karatra rehetra amin'ny toetr'andro ho an'ny Tesla Model Y Custom Fit Rear Trunk MAT
Ny Lineran'ny karbiteran'ny toetrandro dia natao hiarovana ny faritra misy anao amin'ny fandroahana, tasy, fotaka ary loto.
Mihetsiketsika sy mamandrika rano amin'ny fomba mahomby ny lalan-drano lalina, raha miaro sy misoroka ny rindrin'ny sisiny miakatra
ranon-javatra avy amin'ny fivoahana amin'ny karipetra.
Ny firafitra tsy mahatohitra skid dia manampy amin'ny fitazonana ireo fivarotana sy ny kojakoja azo antoka ao anaty vata fitehirizana nefa tsy mivezivezy.
Amin'ny alàlan'ny teknolojia fitiliana laser avo lenta, ny 3D Cargo Liners rehetra dia namboarina mba hifanaraka amin'ireo vatan'ny vatan-kazo marina miaraka amin'ny fahamendrehana sy ny fandrakofana ny gorodona. Tsy mila miaina ny fofona vita amin'ny fingotra mahafinaritra ianao, tsy mora kokoa ny nanadio an'ireo tsihy ireo. Fafao madio fotsiny amin'ny lamba mando, na esory tsy ho ao amin'ny fiaranao izy, aforeto ny fantsom-panafody ary ataovy vaovao indray ny valizy.
The Ny fiarovan-doha fitondra mandanjalanja dia ny fiarovana anatiny revolisionera ho an'ny fiaranao miaraka amina rafitra telo sosona vaovao. Ny famolavolana telo refy natao ho nomerika norefesina tamin'ny volavolan-tsoratry ny atin'ny fiaranao noho ny fandrika sy ny fako. Ny sosona ambany manohitra ny skid patanty dia mitazona ny tsihy tsy manimba ny karipetra voalohany. Ny sosona ambony kanto dia manome fiarovana, tsy misy rano, fiarovana mba hiarovana ny atiny.
Ny maodely Y TPR fiara mats Custom Fit All-Weather Cargo Liners no fiarovana anatiny sy ny iray amin'ireo fitaovana namboarina tsara indrindra ho an'ny fiaranao. Ampiasaina ny haitao fandrosoana amin'ny laser avo lenta, ny valizy enta-mavesatra tsirairay avy dia refesina mba hifanaraka tsara amin'ny vatan'ny fiaranao amin'ny tena marina sy ny rakotra amin'ny gorodona. Ny fananganana hybrid multi-layer manavao dia natao hanomezana fiarovana anaty fiara feno, hisintona ny hovitrovitra, hampihenana ny tabataban'ny lalana ary hihazonana ireo fivarotana ho azo antoka ao anaty vatan-kazo tsy mihetsika.
Fotoana fandefasana: Oktobra-08-2020
Inona no mahasamihafa anao a ...
PVC sy tsihy TPE tongotra